Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Muwaadiniinta Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa loo sheegay inay ka fogaadaan hoteelada Kabul
Wararka Afgaanistaan • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Daalibaan waxay raadineysaa aqoonsi caalami ah iyo kaalmo si looga fogaado musiibo bani'aadamnimo.
Daalibaan waxay la halgamayaan sidii ay u xakamayn lahaayeen halista uga imaanaysa ISIL qaybteeda Afgaanistaan.
Tobaneeyo qof ayaa lagu dilay masaajid weerar ay sheegatay dowladda Islaamiga ah ee Gobolka Khorasan, ISKP (ISIS-K).
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa uga digtay dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Afghanistan inay ka fogaadaan hoteellada ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Kabul. Xafiiska Arrimaha Dibedda, Barwaaqo -sooranka iyo Horumarinta ee Britain ayaa digniin kan la mid ah siiyay dhammaan muwaadiniinta UK ee hadda ku sugan waddanka.
“Muwaadiniinta Mareykanka ee jooga ama ku dhow Hoteelka Serena waa inay si dhaqso ah uga baxdo, ”ayay tiri Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, iyadoo tixraaceysa“ khataraha amniga ”ee aagga.
“Marka la eego khataraha soo kordhay waxaa lagugula talinayaa inaadan degin hoteellada, gaar ahaan Kabul,” ayuu yiri Xafiiska Arrimaha Dibadda, Barwaaqo -sooranka iyo Horumarinta Britain.
Digniinta ayaa timid maalmo uun kadib markii daraasiin dad ah lagu dilay masaajid weerar ay sheegatay dowladda Islaamiga ah ee Gobolka Khorasan, ISKP (ISIS-K).
Tan iyo markii ay Taliban qabsashada, ajaanib badan ayaa ka tagay Afghanistan, laakiin qaar ka mid ah saxafiyiinta iyo shaqaalaha gargaarka ayaa weli ku sugan caasimadda.
Caankii la yaqaan Hoteelka Serena, huteel raaxo leh oo caan ku ah socotada ganacsiga iyo martida ajnabiga ah, ayaa laba jeer lala beegsaday weeraro argagixiso.
Daalibaan oo awoodda Afgaanistaan ​​la wareegtay bishii Ogosto, ayaa raadineysa aqoonsi iyo kaalmo caalami ah si looga fogaado musiibo bani'aadamnimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka ka jira.
Laakiin, markii kooxda argagixisada ahi ay ka soo gudubtay koox hubaysan oo ay u gudubtay awood maamul, waxay la halgamaysaa sidii ay u xakamayn lahayd halista ISIL qaybteeda Afgaanistaan.
Dhammaadka todobaadka, waayeel Taliban iyo wufuuda Maraykanka ayaa wada-hadalkoodii ugu horreeyey oo fool-ka-fool ah ku yeeshay caasimadda Qadar ee Doha tan iyo markii Maraykanku ka baxay.
Wadahadallada “waxaa diiradda lagu saaray walaacyada amniga iyo argagixisada iyo marin ammaan ah oo loogu talagalay muwaadiniinta Mareykanka, muwaadiniinta kale ee ajnabiga ah iyo shuraakadayada Afgaanistaan,” sida uu sheegay afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibadda Ned Price.
Sida laga soo xigtay Waaxda Arrimaha Dibedda, wada -xaajoodyadu waxay ahaayeen “kuwo daacad ah oo xirfadleyaal ah” mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa ku celceliyay in "Taliban lagu xukumi doono ficilladeeda, ma aha erayadeeda oo keliya".
Daalibaan ayaa sheegtay in Mareykanka uu oggolaaday inuu gargaar u diro Afgaanistaan, in kasta oo Mareykanku sheegay in arrinta laga wada hadlay oo kaliya, wixii kaalmo ahna ay heli doonaan dadka Afgaanistaan ​​oo aysan ku jirin dowladda Daalibaan.